Fipoahana Etona Fandrehitra Nahafatesana 19 Farafahakeliny tao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Fipoahana Etona Fandrehitra Nahafatesana 19 Farafahakeliny tao Meksika
Voadika ny 08 Mey 2013 11:37 GMT
Nahafatesana olona 19 sy naharatrana olona 36 farafahakeliny ny fipoahana fitoerana gazy iray araka ny tatitra farany. Ny maraimben'ny 7 mey 2013 no nitrangan'izany fipoahana izany tao Ecatepec de Morelos County (Fanjakan'i Mexico).
Ao anatin'ny faritra midadasik'i Mexico i Ecatepec.
Ny gazety meksikana El Universal [es], ao amin'ny aterineto, no iray amin'ireo sehatra voalohany nilaza ny vaovao mafana:
Kamiaobe iray mitondra izay heverina ho gazy no nipoaka tamin'ity maraina ity teo amin'ny manodidina ny vondro-piarahamonin'i San Pedro Xalostoc community, izay niteraka faharatrana sy fahafatesan'olona tsy voafaritra sy niteraka firehetana fiara maro, hoy ny tatitry ny fiarovana sivilin'ny vaki-paritr'i Ecatepec.
Nanambara ny Sekreteram-panjakana misahana ny fiarovana ny olo-pirenena, Salvador Neme Sastré, fa hatramin'izao dia oloa 13 no maty ary 13 ny maratra, ary 15 ny fiara sy 20 ny trano potika.
Milenio [es] ao amin'ny aterineto no mitatitra ny anton'ny loza:
Nitranga ny loza satria indroa noho ny haben'ny remôrka ny haben'ilay fitoerana gazy; tafala tamin'ny toerany izany ka nipoaka, ary vokatr'izany dia niteraka afo.
Nilaza ny mpamonjy voinan'i Ecatepec fa ravan'ny afo sy ny onjan'ny fipoahana ny fanorenana lehibe teo amin'ny manodidina. Indroa ihany koa no nisy fipoahana avy tamin'ilay fitoerana gazy (entona fandrehitra) akaikin'ny trano maromaro.
Nampafantatra ihany koa ny bilaogy Sopitas [es] fa efa notazonin'ny manampahefana (vonjimaika) ilay tompon'andraikitra tamin'ity loza ity:
Voasambotra ny saoferan'ilay kamiao ary any amin'ny Hopitaly Magdalena de las Salinas izy. Omar Días Olivares ny anarany. Ny anaran'ny orinasa tompon'ny fantsona dia Termo Gas. Efa olona 18 no maty, 40 no naratra, 23 ny trano ary 15 ny fiara potika.
Ao amin'ny kaontiny Twitter ny Sekreteram-panjakana misahana ny fiarovana ny olo-pirenena, Salvador Neme (@NemeSSC) [es], no manome ny isa farany vokatry ny loza:
@NemeSSC: Ny tarehimarika amin'izao fotoana amin'izay nitranga tany Ecatepec dia 18 ny olona maty, 36 ny naratra.
Jenaro Villamil (@jenarovillamil) [es], bilaogera sady mpanao gazety, nanararaotra ny hampahatsiahy ny rehetra fa eny an-dalana ho any Vatikana ny governoram-panjakana, Eruviel Ávila:
@jenarovillamil: olona 18 maty, 36 naratra, 13 tena voa mafy taorian'ny fipoahana teny amin'ny lalamben'i México-Pachuca, tany Ecatepec. Ary any Vatikana i Eruviel.
Nankasitraka voalohany ireo nanampy izay tsy afa-niantso vonjy ny mpisera AdryBird (@adyvalencya) [es]:
@adyvalencia: Mamelà ahy hankasitraka ireo mpitsabo mpanampy izany namonjy, nanampy ary nanadio ny ferin'ireo alika may tamin'ny fipoahana tao Ecatepec
Federico Muñoz J. (@fmunozj) [es] niteny izao manaraka izao:
@fmunozj: Mampihoronkoditra ny nitranta tany Ecatepec. Mahalaza azy manontolo ny sary.
Ary satria moa efa mahazatra ny Meksikana, dia misy ireo sasany miaingitraingitra ka manimbazimba ireo tratran'ny voina, tahaka an'i Ana (@AnaFloresJ) [es] izay nanondrotondro (araka ny fijeriny) ireo maty:
@AnaFloresJ: 13 ny olona maty tao Ecatepec:
- 3 mpandrafitra.
- 4 saofera fiara fitateram-bahoaka.
- 2 mpamafa kiraro
- 1 mpanampy ny mpiandry fiara miatsona
- 3 mpangalatra
Ecatepec dia miorina amin'ny tanàna be mponina izay tsy manana ny fikarakarana fototra ampy; San Pedro Xalostoc (izay nisy ny loza) dia iray amin'ireo tanàna valo izay mandrafitra ny vaki-paritra araka ny hita ao amin'ny Wikipedia, ahitana ireo olona maro very trano nandritra ny fihovitry ny tany tamin'ny taona 1985 io tanàna io.